UMsunduzi ucela usizo enkampanini ehlinzeka ngogesi kuleli - Bayede News
UMasipala uMsunduzi usalokhu ulusebenze njalo udaba lokulungisa ingqalasizinda yawo esihanjelwe isikhathi. Ezinye zezinkinga ezihlasele uMsunduzi ezithinta ukuphela kukagesi, okudalwa ingqalasizinda endala, abantu abakokotela ugesi okuze kuholele ekutheni kuqhume ngisho neziteshi zikagesi ezincane, kuphinde kube ukwenyuka kwesibalo sabantu abakha ngaphansi kwalo Mkhandlu.
Kamuva nje, uMsunduzi usucele ukwelekelelwa inkampani ehlinzeka ngogesi kuleli ukuba ilungise ingqalasizinda yawo, kuphinde kuqhanyukwe namaqhingasu amasha azolekelela ekutheni kuhlinzekwe zonke izindawo ezingaphansi koMsunduzi kubala nalezo ezihlinzekwa uMasipala ugesi okubukeka kuyizo ezithwele nzima kakhulu.
UMqondisi wezokuhlinzeka ngogesi (Executive Director of Distribution) kwa-Eskom, uMnu uMonde Bala (osesithombeni), uvakashele uMsunduzi ukuyohlola ukuthi bangawelekelela kanjani enkingeni yokwehluleka ukuhlinzeka izakhamuzi zawo ngogesi.
Kulo mhlangano kuxoxwe ngokuthi bangasebenzisana kanjani futhi babone ukuthi yiziphi izinto ezimqoka uMsunduzi okumele uzibeke eqhulwini ukuze izakhamuzi zihlinzekwe ngogesi ngendlela efanele.
Obambe njengesikhulu sengqalasizinda eMsunduzi, uMnu uBrendon Sivpassard, uBala usuke emahhovisi amakhulu akwa-Eskom eGoli ukuzoxazulula izinkinga zaseMsunduzi.
“Kube nokungenelela kukaShampeni Wesifunda uMhlonishwa uRavi Pillay, ezingxoxweni eGunjini Lokudingida (War Room) wathi kumele kutholakale umuntu ophezulu wakwa-Eskom, bese kuhlanganiswe imiqondo. Wabe esethinta abaphezulu ukuze kuxazululwe lezi zinkinga. Sebevakashele amasubstation ama-3 ngoba befuna ukuzibonela ukuthi kwenzekani, yini eyinkinga. Ufike neqembu lakhe, kubwala nezincithabuchopho uma kuziwa ngakugesi asebelekelela iqembu lethu ukuthola izixazululo,” kusho uSivpassard.
Uqhube wathi inhloso ukusebenzisana. “Sifuna ukugcina yonke indawo inogesi ngoba uma kusokola izakhamuzi kuzolimala nathi ngoba kuzothikamezeka nemvume yethu yokuhlinzeka ngogesi kwa-Eskom.”
UBala uthe: “Kulandela umhlangano esaba nawo noMhlonishwa uPillay kanye noNgqongqoshe woMnyango Wamabhizinisi kaHulumeni uMhlonishwa uPravin Gordhan, kanye neSikhulu Esiphezulu uMnu u-Andre de Ruyter sivumile ukuthi sizolandelela izinkinga idolobha elibhekene nazo. Sathi sizofika njengo-Eskom silekelele. Kimina kubalulekile ukuthi sibe nalo mdlandla wokusebenzisana ngoba njengoba eseshilo uMnu uSivparsard ukuthi uma kulimala izakhamuzi kulimala yonke into emqoka nokusebenza kwezinto ezimqoka. Sizokwenza konke okusemandleni ukuthi isimo sisibeke kwesesivumelekile bese siqinisekisa ukuthi umnotho wendawo siwugcina ulokhu uqhubeke njalo ukwakheka.”